ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ငရဲ သား၏ ထိုနိုင်ငံအား .... မြန်မာနိုင်ငံဟု ခေါ်သည်.
ငရဲ သား၏ ထိုနိုင်ငံအား .... မြန်မာနိုင်ငံဟု ခေါ်သည်.
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံး အစိုးရဌာနများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပါအ၀င် ဌာနဆိုင်ရာ information များကို သတင်းအနေနှင့် ရောင်းချသော နိုင်ငံ..။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံး Mobile Sim card များကို သမ္မတကိုယ်တိုင် စီမံခန့်ခွဲရောင်းချသော နိုင်ငံ..။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပမထမဆုံး ပါတီအဖြစ် အသွင်မပြောင်းပါဘူးဟု မီဒီယာများအား ပြောကြားကာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပါတီအဖြစ် အသွင်ပြောင်းခဲ့သော အာဏာရအစိုးရ ရှိသည့်နိုင်ငံ...။
မိမိတို့ မဲရရှိရေးအတွက် နယ်စပ်မှဝင်ရောက်အခြေချနေသော လူမျိုးဘာသာခြား ငါးသိန်းခန့်အား ယာယီမှတ်ပုံတင်ပေးကာ မဲထည့်စေခဲ့ပြီး ....
အမျိုးသားရေးကို ဘယ်တော့မှ သစ္စမဖောက်ဟု ကြွေးကျော်လေ့ရှိသူများ ပါဝင်ဦးဆောင်သည့် အာဏာရပါတီရှိသည့် ပထမဆုံး နိုင်ငံ..။
လူဦးရေ သိန်းနဲ့ချီ သေဆုံးပျောက်ဆုံးသွားသော ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်တိုက်ခတ်ချိန်တွင် ပြည်သူများအား ...ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖွတ်အတင်း ထောက်ခံရန်ဖိအားပေးခဲ့သော နိုင်ငံ...။
လူဦးရေ သိန်းနဲ့ချီ ကယ်သူမရှိ တဖြုတ်ဖြုတ် သေဆုံးနေသော်လည်း မိမိတို့လုပ်နိုင်သည်ထက် အစစအရာရာ သာလွန်သော နိုင်ငံတကာ၏ ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီမယူခဲ့သည့် ပထမဆုံး နိုင်ငံ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်းပြည်ကို စုတ်ပြတ်မွဲပြာကျအောင် အုပ်စိုးခဲ့သော အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အနားယူသွားသော်လည်း ၄င်း၏ မြေးဖြစ်သူအား ယနေ့အထိ body gard များ လမ်းရှင်းပေးသူများအဖြစ် တပ်မတော်အရာရှိ in service များက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေသော .. နိုင်ငံ..။
မိမိနိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာ၊ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် လုံခြုံရေးကို ဂရုမပြုဘဲ အိမ်နီးခြင်း အင်အားကြီးနိုင်ငံအား ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ၊ ကား၊ ရထားလမ်းများကို ကန့်လတ်ဖြတ် ဖောက်လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်သော ပထမဆုံး နိုင်ငံ..။
ထိုရေနံ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းသွားရာလမ်းကြောင်းမှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် စခန်းများကို ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးပြ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေသော နိုင်ငံ...။
တစ်နှစ်ကို သတို့သမီး ၂၀၀၀၀ ခန့် လူကုန်ကူးရောင်းစားခံနေရသော ပထမဆုံး နိုင်ငံ..။
သစ်၊ ရေနံ၊ ကျောက်မျက်ရတနာ၊ ရွေ၊ ငါး အစရှိသဖြင့် နိုင်ငံနှင့်မမျှတ ပေါများစွာထွက်ရှိလာပြီး ထိုမျှလောက်ပေါများသည့်သယံဇာတများအား ကုန်ခန်းသလောက်နီးနီး ရောင်းချကာ တိုးတက်မှု မရှိလာသည့် ပထမဆုံးသော နိုင်ငံ..။
စေတီပုထိုး ဘုရားကျောင်းကန်၊ သံဃာတော် များစွာရှိပြီး . လောဘ၊ ဒေါသ၊ အတ္တ၊ မာန်မာနများ၊ ငါစွဲများ၊ ဟုန်းဟုန်းထနေသော နိုင်ငံ .....။
နိုင်ငံတကာမှ လေးစားခန့်ညားသော အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ဦးဆောင်နေသော
အတိုက်အခံ လူထုခေါင်းဆောင် ရှိသော်လည်း မိမိ အလို အတ္တကို မလိုက်လျှင် ထိုလူထုခေါင်းဆောင်အား .. ချက်ချင်း လေးစားမှုမရှိတော့ပဲ နားနားကပ် ကလော်တုတ်သော ပြည်သူများ ရှိသည့် ပထမဆုံးနိုင်ငံ...။
နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး ပေါ်လစီ အကျပ်အတည်းတွေ့တိုင်း
တရုတ်နှင့်ပတ်သက်သော စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများ စိန်ခေါ်များ ကြီးထွားလာလေ့ရှိတိုင်း..။
အစိုးရအစဉ်အဆက်တွင် .. အစ္စလာမ် - ဗုဒ္ဒဘာသာ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ပထမဆုံးသော နိုင်ငံ..။
ထိုနိုင်ငံအား .... မြန်မာနိုင်ငံဟု ခေါ်သည်.
စာရေးသူ kotun အချိန် 4/06/2013
ကဏ္ဍ ထိုနိုင်ငံအား .... မြန်မာနိုင်ငံဟု ခေါ်သည်.